Hogaamiyaasha Soomaaliya iyo Uganda oo ka wadahadley dib u dhiska ciidammada Soomaaliya - Radio Risaala: Somali News Online
Home XULKA WARARKA Hogaamiyaasha Soomaaliya iyo Uganda oo ka wadahadley dib u dhiska ciidammada...
Hogaamiyaasha Soomaaliya iyo Uganda oo ka wadahadley dib u dhiska ciidammada Soomaaliya
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Uganda, Gen. Yoweri Kaguta Museveni ayaa maanta kulan muhiim ah ku yeeshay xarunta madaxtooyada dalka Uganda ee magaalada Entebbe.
Kulankan ayaa ajendayaasha ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa iskaashiga dhinaca milateri ee labada dal ka dhexeeya, doorka ciidammada Uganda ee hawlgalka AMISOM, dagaalka lagula jiro argagixisada gobolka iyo dib u dhiska ciidammada Soomaaliya.
Madaxweyne Museveni oo shaley dib loogu dhaariyey inuu xilka sii hayo, ayaa soo dhoweeyay horumarka Soomaaliya ay ka sameyneyso dhinacyada amniga, siyaasadda, adeegyada bulshada iyo dib u soo nooleynta kaabeyaasha dhaqaalaha.
Waxaa kale oo labada Madaxweyne ay isla gorfeeyeen doorashooyinka lagu wado inay sannadkan ka dhacaan Soomaaliya, iyadoo uu Madaxweyne Museveni aqbalay codsi uu soo jeediyay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa in ciidammada Uganda ee qeybta ka ah AMISOM ay doorkooda ka qaataan sugidda amniga waqtiga doorashada, oo ay gacan siiyaan ciidammada Soomaaliya.
Labada Madaxweyne ayaa sidoo kale isku afgartey in marka laga soo tago iskaashiga dhinaca amniga ah, loo baahan yahay in la ballaariyo dhinacyada ay kale ee ay iska kaashan karaan, siiba dhinacyada dhaqaalaha, waxbarashada, tiknoloojiyadda, arrimaha bulshada, dhaqanka iyo ciyaaraha.
Previous articleDHAGEYSO: Wararkii ugu dambeeyey duqeyn ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose
Next articleKoofur Galbeed oo sheegtay in ay dishay sarkaal ka tirsan Shabaab